Maqaallada Nate Burke ee Martech Zone |
Maqaallada by Nate Burke
Ganacsiyadu waxay had iyo jeer raadiyaan siyaabo lagu hagaajiyo waxtarka iyo waxtarka hawlgalkooda labadaba. Tanina waxay unoqon doontaa diiradda muhiimka ah markaan sii wadno duulimaadka cimilada ganacsi ee cakiran ee kacsan. Nasiib wanaagse, e-commerce ayaa kobcaya. Si ka duwan tafaariiqda jirka, taas oo si weyn u saameysay xaddidaadaha safka ah, iibka khadka tooska ah ayaa socda. Inta lagu jiro xilliga ciidaha ee 2020, oo caadi ahaan ah xilliga dukaamaysiga ugu mashquulka badan sanad kasta, iibka tooska ah ee Boqortooyada Midowday ayaa kor u kacay